Onye bụ Benjamin Banneker? - Afrikhepri Foundation
Ònye bụ Benjamin Banneker?
Banneker, nwa Robert na Mary BANNAKY mụrụ na 1731, na nso Osimiri Patapsco nke dị ihe dị ka kilomita 16 site na Baltimore. Mama BANNEKER bụ onye Mulatto n'efu; Nna ya, onye Afrịka nke kwesịrị ịzụta nnwere onwe ya iji pụọ n'ọnọdụ ohu ya. A maara nna nna BANNEKER Bannaka; Mgbe ahụ, n'okpuru nke Bannaky. A na-akpọ nne nne ya Molly Walsh. O buru uzọ oru ohu na England, emesia ziga ya na Maryland, na nkwekorita odibo nke oru.
Mgbe Molly Walsh rụchara ‚afọ asaa nke mkpọrọ, ọ zụrụ ugbo na ndị ohu abụọ nyere ya aka lekọta ya. Ọ hapụrụ ndị ohu ya abụọ, ma lụọ otu n’ime ha: Bannaky.
Ha nwere ọtụtụ ụmụ gụnyere nwa nwanyị, Mary. Mgbe Mary mere agadi, ọ zụtara ohu aha ya bụ Robert ma lụọ ya; Ha nwere ọtụtụ ụmụ gụnyere Benjamin.
Benjamin BANNEKER toro n'ubi ezinụlọ nke dị nso n'otu obodo a na-akpọ "Bannaky Springs" n'ihi isi iyi nke mmiri dị mma ebe ahụ.
BANNEKER wuru ọwa mmiri na obere ihe mgbochi mmiri iji dozie mmiri mmiri chọrọ maka ịgba mmiri.
Ọrụ BANNEKER dị ezigbo njọ nke na ihe ọkụkụ Bannaky toro ọbụna n’oge ụkọ mmiri. Ọzọkwa, ezinụlọ a nke ndị isi ojii na-akọ naanị ụtaba dị mma.
Mgbe ndị ọrụ ugbo agbata obi ha kpebiri ịgbanwe ọka ha na-emepụta sịga iji dochie ọka wit ha, BANNEKER, site n'inwe ihe ọmụma siri ike, nyere ha aka ịkwado ụlọ ọrụ ugbo ha.
Nne nne BANNEKER Molly Walsh kụziiri ya ka ọ gụọ na ụmụnne ya. Maka nke a, o jiri Akwụkwọ Nsọ dịka akwụkwọ nkuzi. Na ndagwurugwu ebe ha bi, odighi akwukwo. N'otu oge ọkọchị, otu onye nkụzi Quaker bịara biri na ndagwurugwu ahụ; O mepere ulo akwukwo maka umu nwoke. BANNEKER gara ebe ahụ. Onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ gbanwere aha ya na Bannaky gaa BANNEKER.
N’ụlọ akwụkwọ, ọ mụrụ ka e si ede ma na-eme usoro agụmakwụkwọ dị mfe.
BANNEKER hapụrụ ụlọ akwụkwọ mgbe ọ dị afọ iri na ise ka ọ malite ịchịkwa ọrụ ezinụlọ.
Mgbe ọ dị afọ 21, na 1752, BANNEKER nwere ahụmịhe pụrụ iche: ọ hụrụ otu mgbanaka akpa, ụdị, nke nwoke aha ya bụ Josef Levi. BANNEKER ama enen̄ede ama utọ ukpeme emi.
Ọ hụtụbeghị ụdị ihe a na ndụ ya. Livai nyere ya ya.
Elekere a ga-atụgharị ndụ BANNEKER ihu. O weere elekere ma nwaa ịghọta etu o si arụ ọrụ.
BANNEKER wepụtara elekere yiri nke ahụ site na obere iberibe osisi wee mepụta pendulum nke ya; onye mbụ bidoro awa ahụ, emebere kpamkpam na America.
Mpempe akwụkwọ BANNEKER bụ nnọọ nke na ọ na-agbakọ kwa awa, n'oge, ruo afọ 40.
Ọrụ BANNEKER na pendulums mere ka ọ rụzie elekere, pendulums, clocks na sundials.
BANNEKER nyeeredị Joseph Ellicott aka ịrụ elekere pụrụ iche. Ọ bụ ezigbo enyi nke Ellicott bụ onye nyere ya ego maka akwụkwọ ndị dị na mbara igwe na mgbakọ na mwepụ yana ngwa maka ikiri kpakpando.
BANNEKER, agbanyeghi na o kuziri ihe banyere akwukwo banyere ihe omuma banyere mbara igwe na nke mgbakọ na mwepu, o buru n’amụma banyere ọnwa n’anyanwụ nke Eprel 14, 1789, si otú a na-emegide amụma ndị buru amụma banyere ndị ọkà mmụta sayensị na ndị ọkà mmụta banyere mbara igwe n’oge ahụ.
Mgbe nne na nna BANNEKER nwụrụ, ha naara ya ala ezinụlọ, ebe ọ bụ na ụmụnne ya ndị nwanyị abụọ, lụrụ nwanyị, hapụrụ ya.
BANNEKER ji igwe na-amụrụ mbara igwe rụọ klọọkụ iji mụọ kpakpando na ịgbakọ. N'ịrụ ọrụ bụ naanị, ya na ndị ọbịa ole na ole, BANNEKER mere mkpokọta nsonaazụ nsonaazụ ọ bipụtara na almanac ya. O zigala almanac a, ya na akwụkwọ ozi dị peeji iri na abụọ, ka ọ gakwuru Thomas Jefferson (mgbe ahụ Onye ode akwụkwọ nke United States), na mmeghachi omume na nkwupụta ịkpa ókè agbụrụ nke ndị ikpeazụ banyere ikike ọgụgụ isi nke ndị Africa.
BANNEKER nọgidere na-ebipụta akwụkwọ akụkọ banyere ya na nke ọtụtụ ndị ọzọ a ma ama na ndị ọkà mmụta sayensị na ndị na-ese ihe n'oge ahụ, site n'ugbo ya na Maryland, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọnwụ ya.
Ọ bụ ezie na BANNEKER mụrụ ma dekọọ nsonaazụ nke ọrụ ya niile ruo ọnwụ ya, ọ kwụsịrị ibipụta Almanac ya n'ihi ahịa ya adịghị mma.
Mgbe o wuchara ụlọ nlere anya ya na 1791, BANNEKER tinyere aka na ndị isi nke Onye isi ala George Washington họpụtara, isere atụmatụ maka District nke Columbia, Washington, DC.
BANNEKER bụ nanị Afrika ka o nweta nkwa ụlọ ọrụ.
BANNEKER na Andrew Ellicott, nwanne nwanne George Ellicott, rụkọrọ ọrụ na Pierre L'Enfant, onye na-atụpụta ụkpụrụ ụlọ nke mebere District Columbia, Washington DC.
Apụrụ ọrụ ahụ n’aka L’Enfant n’ihi iwe ya, nke mere na mgbe ọ pụrụ, o weere atụmatụ ya. BANNEKER na-agbapụta site na ebe nchekwa atụmatụ nke obodo ahụ, si otu a na-etinye ndị gọọmentị America mbọ na mmefu a ga-akpata goro onye ozo.
Obere iwe: Akwụkwọ ozi nye nwa m nwoke
Mitochondrial Eve na Adam: ihe akaebe nke mbido pụrụ iche nke mmadụ na Africa
Afrịka na-arụ ụgbọ ala nke ya: Lee ụgbọ ala isii a mere n'ime Afrịka